Goobaha waaskada Iibka iyo Ijaarka dul Realtyww Info
arag Goobaha waaskada la daabacay 4 months ago
Bakhaarku waa dhisme ganacsi oo lagu keydiyo alaabada. Bakhaarradan waxaa isticmaala soosaarayaal, soo dejiyeyaal, dhoofiyeyaal, jumladleyda, ganacsiyada gaadiidka, caadooyinka, iwm. Inta badan waa dhismayaal muuqda oo waaweyn oo ku yaal aagagga warshadaha ee magaalooyinka, magaalooyinka iyo tuulooyinka. Caadi ahaan waxay leeyihiin dokumantiyo rar si ay ugu rarida ugana saaraan alaabada gawaarida waaweyn. Mararka qaarkood bakhaarada ayaa loogu talagalay rarida iyo soo dejinta alaabta si toos ah wadada tareenka, madaarada, ama dekedaha. Badanaa waxay leeyihiin cranes iyo fargeetooyin loogu talagalay alaabada guuritaanka, kuwaas oo badanaa lagu dhejiyo boorarka caadiga ah ee ISO oo lagu rakibay santuuqa boorarka. Alaabada la kaydiyey waxaa ka mid noqon kara alaabada ceyriinka ah, alaabada xirxirka, alaabada firaaqada ah, qeybaha, ama alaabada la dhammeeyay ee la xiriirta beeraha, soosaarka iyo wax soo saarka. Afka Ingriiska Hindiga bakhaar baa loogu yeeri karaa godown.